ပင်လုံဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရပြန်တဲ့ ဗေလုဝရဲ့လက်ရှိကျန်းမာ ရေးအခြေအနေကို အသိပေးလာတဲ့ အောင်သော် - Tha Dinn Oo
နိုင်ငံကျော် ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယို ဟာသသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဗေလုဝကတော့ အနုပညာ မှာ အင်မတန် လက်စောင်းထက်တဲ့ ဝါရင့်သမ္ဘာရင့်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗေလုဝကတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရုံသာမက
ဝတ္ထုနဲ့ ဇာတ်ညွှန်းတွေများစွာကိုလည်း ရေးသားခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေကို ဘဝအမောပြေပျောက်စေခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်ဒမီဆု ကြီး တစ်ဆုကို လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီဖြစ်တဲ့ ဗေလုဝကတော့ နောက်ပိုင်းမှာ သူ့ရဲ့ ကျန်းမာရေးအ ခြေအနေကြောင့် အရင်ကလောက် အနုပညာအလုပ်တွေကို မလုပ်ကိုင်နိုင်တော့တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် အနုပညာအလုပ်နဲ့ ထမင်းဆိုင်စီးပွားရေးတို့ကို လှည့်မကြည့် နိုင်တော့တဲ့ ဗေလုဝက လက်ရှိမှာလည်း ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဗေလုဝရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ ပက်သတ်ပြီး သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်သူ
အောင် သူ က “ရုပ်ရှင်နှင်ဗီဒီယိုဟာသရုပ်ဆောင် ဗေလုဝ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် ပင်လုံဆေး ရုံ ကြီး အခန်း (၁၃၁၈ ) တွင် ဆေးဝါးကုသနေရကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ အမြန်ဆုံး ပြန်ကျန်း မာပါစေဟု ဆုတောင်း ပါသည်ဗျာ။” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာကနေ အသိပေးလာခဲ့ပါ တယ်။
ဗေလုဝကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ပိုင်းကလည်း ဦးနှောက်သွေးခွဲမှုကြောင့် ပင်လုံဆေးရုံမှာပဲ ဆေးကုသ မှု ခံယူခဲ့ပြီး ပြန်လည်သက်သာလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကချစ်တဲ့ ဦးဗေတစ်ယောက် ဒီတ စ်ခါမှာလည်း
အမြန်ဆုံးနေကောင်းသက်သာလာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ရှု ပေး ကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ် နေ့ ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
နိုငျငံကျောျ ရုပျရှင်နဲ့ ဗီဒီယို ဟာသသရုပျဆောင်တဈယောကျဖြစ်တဲ့ ဗလေုဝကတော့ အနု ပညာ မှာ အင်မတနျ လကျစောငျးထက်တဲ့ ဝါရငျ့သမ်ဘာရင့်တဈယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတ ယျ။ ဗလေုဝကတော့ ရုပျရှင်ဇာတ်ကားတွမှော ပါဝငျသရုပျဆောင်ခဲ့ရုံသာမက ဝတ်ထုနဲ့ ဇာ တျညှှ နျးတွမျေားစွာကိုလညျး ရေးသားခဲ့ပွီး ပရိသတျတွကေို ဘဝအေ မာေြ ပပျောကျစခေဲ့သူ ဖြစ်ပါတယျ။ အကယ်ဒမီဆု ကွီး တစ်ဆုကို လကျဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားပွြီဖစ်တဲ့ေဗလုဝကတော့ နောက်ပိုငျးမှာ သူ့ရဲ့ ကျနျးမာရေးအ ခြေအနေကွောငျ့ အရငျ ကလောကျ အနုပညာအလုပျတွကေို မလုပ်ကိုင်နိုငျတော့တာပဲ ဖြစ်ပါ တယျ။
ကျနျးမာရေးအြခေအနေကွောငျ့ အနုပညာအလုပ်နဲ့ ထမငျးဆိုင်စီးပွားရေးတို့ ကို လှည့်မကွညျ့ နိုငျတော့တဲ့ ဗလေုဝက လကျရှိမှာလညျး ဆေးရုံမှာ ဆေးကု သမှုခံယူနရေတယ်လို့ သိရပါတယျ။ ဗလေုဝရဲ့ ကျနျးမာရေးအြခေအနေနဲ့ ပကျ သတျပွီး သရုပျဆောင်တဈယောကျဖြဈသူ အောငျ သူ က “ရုပျရှင်နှင်ဗီဒီယိုဟာ သရုပျဆောငျ ဗလေုဝ ကျနျးမာရေးအြခေအနေကွောငျ့ ပင်လုံဆေး ရုံ ကွီး အ ခနျး (၁၃၁၈ ) တွငျ ဆေးဝါးကုသနေရကွောငျး သတငျးရရှိပါသညျ။ အမြန်ဆုံး ပြ န်ကျနျး မာပါစဟေု ဆုတောငျး ပါသည်ဗျာ။” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာကနေ အသိပေးလာခဲ့ပါ တယျ။
ဗလေုဝကတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ နှစ်ပိုငျးကလညျး ဦးနှောကျသွေးခွဲမှုကွောငျ့ ပငျ လုံေ ဆးရုံမှာပဲ ဆေးကုသ မှု ခံယူခဲ့ပွီး ပြန်လညျသကျသာလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယျ။ ပရိသတ်ကချစ်တဲ့ ဦးဗတေဈယောကျ ဒီတ စ်ခါမှာလညျး အမြန်ဆုံးနေကောငျးသကျသာလာပါစလေို့ ဆုေ တာငျးပေးလိုက်ပါတယျ။
ဆေးရုံကြီးမှာ ဆရာဝန် သူနာပြု (၇၀)လောက် ကိုဗစ်ကူးခံရတာ ဝမ်းသာစရာပါလို့ပြောတဲ့သူကို ဒဲ့ပြောလိုက်တဲ့ ဒေါက်တာနေသွေး
တောက်ရူးလို့ ပြောလဲ အပြောခံရလို့ ဂုဏ်ယူနေမယ့်လူမျိုး။ ဟိုတလောထဲက တလွဲတွေရေးနေတာ တွေ့ထဲက ထိုင်ဟားနေတာ။ ဟာဗက်တွေ ယေးတွေ လျှောက်ပြောနေထဲက အမေရိကန်အကြောင်း မှမသိတာ အထင်အရှား။ Dr. Fauci က စပီး ဆေးသိပ္ပံတဖွဲ့လုံးက LD မချလို့ ထရန့်ကို ပြောနေတာတွေမသိဘူး။ တသက်လုံး ဘယ်ရွေးကောက်ပွဲမှ ဝင်မပါခဲ့တဲ့ အမေရိကန်သိပ္ပံပညာရှင်များအစည်းအရုံးက ဘိုင်ဒန်ဘက်က ရပ်တည်မယ်လို့ ကြေညာတာလဲ သိပုံမရဘူး။ အမေရိကန်တပြည်လုံးက လူ ၂ သိန်းကျော်သေတာ ထရန့်ကြောင့်ဆိုပီး လက်ညှိုးထိုးတာလဲ သူမသိဘူး။ အခုလဲ ပိုးကူးတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုတောင် ဝမ်းသာရဦးမတဲ့။ လူကမွေးတာမှ ဟုတ်ရဲ့လားပဲ။ အဲဒီ ဝန်ထမ်းတွေလဲ သွေးနဲ့ သားနဲ့ အသက်နဲ့။ မိသားစုတွေ ရှိကြတယ်။ တခါဖြစ်လို့ ပျောက်သွားသူက mask မတပ်ရဘူးလို့ […]
တိုင်ရွန် က ကန်တော့ပြီး လာတောင်းပန်မယ် လို့ ဖုန်းဆက် ခဲ့ကြောင်း အချို့ကိ စ္စတွေကြောင့် စိတ်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း ပြောပြခဲ့တဲ့ ယုန်လေး
တိုင်ရွန် က ကန်တော့ပြီး လာတောင်းပန်မယ် လို့ ဖုန်းဆက် ခဲ့ကြောင်း အချို့ကိ စ္စတွေကြောင့် စိတ်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း ပြောပြခဲ့တဲ့ ယုန်လေး ပရိ သတ်ကြီးရေ ယုန်လေးကတော့ လတ်တလောဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ တိုင်ရွန်က ဖုန်းဆက်ပြီး လာကန်တော့ပြီး တောင်းပန်ဖို့ပြောခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေကို အခုလိုပဲ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကငယ်ငယ်ထဲက “ပြည့်စုံတာတဝက် မပြည့်စုံတာတဝက်” အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းကြီးလာရတယ်။ အမြဲတမ်းအကောင်းကြီးပဲ အမြဲမရဘူးဗျာ။ ကျွနါတော်ငယ်ငယ်တုန်းက အဖေအမေက အဲ့လောက်ကြီး အဆင်မပြေဘူး။ အဆင်ပြေတဲ့ လူတန်းစားဆိုပေမယ့် ချမ်းသာတဲ့အထဲမှာမပါဘူး။ အဖေနဲ့အမေ ဆုံးသွားခဲ့ပေမယ့် မွေးစားခဲ့တဲ့ အဖိုးနဲ့အဖွားက အရမ်းချမ်းသာတယ်။ အဲ့လိုမျိုးနှစ်ခု အမြဲတမ်းဆုံနေတယ်။ ကျွန်တော့်သီချင်း “အချစ်အတွက် ကံမကောင်းခဲ့သူ” လူသိတယ်။ ကျွန်တော် ထောင်ကျသွားတယ်။ အဲ့လိုမျိုးပဲ အောင်မြင်မှု ပျော်ရွှင်မှု စိတ်ချမ်းသာမှုကို တစ်ခုထဲ […]
ကိုဗစ်တောင် မပြီးသေးဘဲ ထပ်မံကူးစက်လာပြန်တဲ့ တရုတ်ပြည်က ဘူဘိုးနစ် ရောဂါအခြေအနေ . . .
ကိုဗစ်တောင် မပြီးသေးဘဲ ထပ်မံကူးစက်လာပြန်တဲ့ တရုတ်ပြည်က ဘူဘိုးနစ် ရောဂါအခြေအနေ . . . ကိုဗစ်တောင် မပြီးသေးဘဲ ထပ်မံကူးစက်လာပြန်တဲ့ တရုတ်ပြည်က ဘူဘိုးနစ် ရောဂါအခြေအနေ . . . တရုတ်ပြည်မှာတွေ့တဲ့_ဘူဘိုးနစ်ပလိပ်ရောဂါအခြေအနေ တရုတ်ပြည် အတွင်းမွန်ဂိုးလီယားဒေသမှာ တိရိစ်ဆာန်ရိုင်းတွေကို မစားဖို့၊ အနားမကပ်ဖို့နဲ့ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ထဲမှာ ညအိပ်ညနေမနေကြဖို့ တရုတ်ပေကျင်း ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ရေးဌာနကသတိပေးထားပါတယ်။ အကယ်၍ တစ်ယောက်ယောက် ကိုယ်ပူတက်ခဲ့ရင် သူ့ရဲ့ တိရိစ်ဆာန်ရိုင်းထိတွေ့ခဲ့မှုနဲ့ မြက်ခင်းလွင်ပြင်သွားခဲ့မှု ရာဇဝင်ကို ကျန်းမာရေးဌာနကို သတင်းပို့ဖို့ ပြောထားပါတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ သူနာပြုတွေကလည်း bubonic plague ဘူဘိုးနစ်ပလိပ်ရောဂါအကြောင်း အကျွမ်းတဝင်လေ့လာထားကြဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ညက အတွင်းမွန်ဂိုးလီယားဒေသ Bayannur မြို့မှာ bubonic plague ဘူဘိုးနစ်ပလိပ်ရောဂါ သံသယရှိသူကို တွေ့ရှိခဲ့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ […]
သူမရဲ့အနုပညာချွေးနဲစာနဲ့ ဝယ်ယူထားတဲ့ ချစ်ရာကောင်းတဲ့အိမ်အသစ်လေး ကိုထုတ်ပြလိုက်တဲ့ ခေးဆက်သွင်
အ မိုက် စား ကောက်ကြောင်း အလှ တရားတွေ နဲ့ ပုရိသတွေ ကို ညို့ယူဖမ်း စား ထား တဲ့ မေရတီဇော်